बब्रिम कुमारलाई भोट गरौँ! - Blogs of Sagar Prasai
बब्रिम कुमारलाई भोट गरौँ!
Mr. Brabik Kumar KC, President of AYON
वैशाख १२ गतेको भुकम्प गएको लगभग १० दिन जति पछि मलाई काभ्रे बाट एकजना दाई भेट्न आउनुभयो र भन्नुभयो-“हाम्रो गाउँ राहत नै पुगेन। घर लड्न लागेका छन्, भित्र गएर खाध्यान्न निकाल्न सक्ने हिम्मत कसैको छैन। नचर्केका घर हुनेको बाट सबैले बाँडेर खाँईदैछ तर अब त्यो पनि सकिन लाग्यो। मुख्य कुरा चाहि, छाना भएन।हाम्रो टोलमा ८ जना अपाङ्ग बालबालिका छन्, ४ जना भर्खर सुत्केरी भएका महिला छन्, तिनीहरुलाई ओत लाउने केहि भएन। हामीलाई सहयोग गर्दिनु पर्यो। एकजनाले तपाईँको नाम दिए अनि भेट्न आएको हजुर!”
आफु भन्दा निकै धेरै उमेरका मान्छेले त्यसरी हात जोडेको देखेर- मलाई असाध्यै नराम्रो लाग्यो। मैले आफ्नो पैसा हालेर वहाँलाई १० बोरा चामल किनिदिए र ग्यालेक्सी स्कुलले बाँडेको ठाउँबाट अरू १० बोरा चामल दिलाईदिए। तर त्यो भन्दा मुख्य कुरा त्रिपालको थियो। बजारमा किन्न खोज्दा पनि त्रिपाल पाईँदैन थियो। ती दाई अँध्यारो मुख लाएर- बरू यी चामल नदिनुस्, त्रिपाल दिनुस् भन्दै हात जोड्थे। म के गर्ने गर्ने सोच्न नसकेर निरिह भएँ।
राहतमा बेस्सरी खटिएका केही साथीहरूलाई फोन गरेपछि थाहा भो- युवा सँस्था सँन्जाल अर्थान आयोनले पनि दुख परेका मान्छेलाई सहयोग गरीरहेको छ भन्ने।मैले त्यहाँ फोन गरे। सुमन पौडेल भन्ने एकजना अति भलाद्मी मान्छेले फोन उठाए, मेरो कुरा सुने र भने- त्रिपालको धेरै अभाव छ दाई। तर हामी कहाँ केही त्रिपाल छन्- अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछौँ। उनले यति भनेपछि मलाई ठुलो राहत भयो। ती काभ्रेका दाईलाई सुमनको नम्बर दिएर आयोन पठाएँ। आयोनबाट उनले १६ थान ठूला खालका त्रिपाल पाएछन्। पछि मलाई फोन गरेर धन्यवाद भने। मैले पनि सुमनलाई फोन गरेर धन्यवाद दिए।
यस्तो सिलसिला चलिरह्यो। मलाई सहयोग माग्न आउनेलाइ सक्ने जति आफुले नसक्ने चाहि आयोनमा समन्व्य गरेर सहयोग जुटाईदिए। आयोनको यस्तो सहयोगी अभियान सँग असाध्यै प्रभावित भएर म एकदिन त्यहाँ पुगे।
त्यहाँको दृश्य साह्रै मनछुने थियो। पचासौँ सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरू खटिरहेका थिए। कोहि कतै जाँदै थिए, कोई आउँदै थिए। सहयोग लिन चाहने मान्छेको पनि लाम थियो। फुर्सद कसैलाई थिएन। त्यसै अभियानमा मेरा धेरै भाईहरू पनि खटिरहेको देखे। उनीहरूलाई भेटेर सोधे- तिमीहरू कसरी चलिरहेका छौ? को छ लिड गर्ने?
एकजना भने- आयोनका प्रमुख बब्रिम दाईले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभाछ। वहाँको समन्व्यले हामीलाई आफ्नो काम गर्न सजिलो भएको छ। त्यहि नेर हो मैले- बब्रिम दाईको बारेमा पहिलो पल्ट सुनेको।
बब्रिम दाई अर्थात बब्रिम कुमार केसी। युवा सँस्था सन्जाल (आयोन) का अध्यक्ष। आयोनले यो पल्ट युवाहरूला गज्जवै सँग परिचालित गर्यो। बब्रिम दाईको भुमिका कति थियो भन्ने कुरा बुझ्न वहाँ र आयोनले हालसालै पाएको दुई उपलब्धिले पनि देखाउँछ। ब्रबिम दाईले “युवा रत्न पुरस्कार” पाउनुभयो भने आयोनले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाएको छ।
उनै बब्रिम दाई अहिले UN Habitat को युथ एडभाजरी बोर्डमा समावेश हुनको लागी मनोनयनमा पर्नुभएको छ। UN Habitat का निति र कार्यक्रमहरूलाई युवा मैत्री बनाउन यो बोर्डको ठुलो भुमिका हुन्छ। यस बोर्डमा प्रत्यक महादेशबाट एक जना महिला र एकजना पुरुष गरेर दुई जना छानिन्छन्। एसिया प्रशान्तबाट अरू सहभागी सँगै ब्रबिम कुमार केसी पनि सो बोर्ड सदस्य हुनका लागी मनोनयनमा पर्नुभएको छ।
नेपालबाट अहिले सम्म कोहि पनि यस्तो मनोनयममा नपरेकाले यो हाम्रो लागी गर्वको कुरा हो। प्रकोपको बेला आफ्नो दुखबाट माथि उठेर अरू धेरैलाई सहयोग गर्ने समुहको नेतृत्व गर्ने ब्रबिम दाईलाई हामीले भोट गरेर UN Habitat Youth Advisory Board मा पुर्याउन सक्यौँ भने- यो हाम्रो देशको लागी नै ठुलो सफलता हुनेछ।
ब्रबिम दाईलाई भोट गर्नका लागी, यो वेभसाईटमा जानुहोला: http://unhabitat.org/yab-2015-voting/ र आफ्नो नाम र ईमेल हाल्नुहोला अनि रिजनमा एसिया प्यासिफिक छानेर, ब्रबिम कुमार केसी मा चिन्ह लगाएर भोट गर्नहोला।भोटिङ्ग अगस्टको ३१ सम्म गर्न सकिन्छ।